प्रतिसेयर आम्दानी ४५ रुपैयाँ रहेको शिखरको सेयर किन अवमूल्यन ? (समग्र विश्लेषण)
Sunday,23 February, 2020 | आइतबार, ११ फागुन, २०७६
बैंक/बीमा पुँजी बजार
शिलापत्र संवाददाता काठमाडौं, ८ भदौ
१८.४६ प्रतिशतले नाफा वृद्धि
४ वर्षमा औसत २८ प्रतिशत प्रतिफल
बीमा शुल्कको मुख्य स्रोत मोटर र अग्नि बीमा
एक वर्षयताकै न्युन विन्दुबाट मूल्य बढ्ने क्रममा
१५औं निर्जीवन कम्पनीको रुपमा आएको शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले सञ्चालनमा आएको पनि १५ वर्ष पार गरेको छ । यस क्षेत्रको अब्बल कम्पनीको रुपमा दरिदै आएको शिखरको गत आवको चौथो त्रैमाशमा पनि १८.४६ प्रतिशतले नाफा वृद्धि गरेर ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको शिखरले २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेसँगै नाफा नोक्सान हिसाबमा ६४ करोड रुपैयाँ सारेको छ । लगानी तथा अन्य आयबाट १३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र पहिले गरेको व्यवस्थाबाट ८० लाख फिर्ता ल्याएसँगै ७८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । व्यवस्था र खर्चमा गएको ३१ करोड पछि ४७ करोड रुपैयाँ नाफा भएको हो । योसंगै बीमा कोष २७ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
शिखरले बिगत ४ वर्षमा सेयर लगानीकर्ताहरुलाई औसत २८ प्रतिशतको दरमा लाभांश दिएको छ । आव २०७४/७५ मा कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेन । कम्पनीले गत आवको सभाबाट ०७४/०७५ को ३० प्रतिशत हकप्रदको प्रस्ताव पारित गरेको छ । हकप्रद जारीपछि पुँजी १ अर्ब ३७ करोड पुग्नेछ ।
ढिलो साधारणसभा गर्ने, समयमा नै लाभांश घोषणा नगर्ने प्रवृत्ति कै कारण पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुप्रति लगानीकर्ताहरुको विश्वास घट्न थालेको छ । कुनै समय हकप्रदकै कारणसमेत सेयर मूल्य बढि तिर्न चाहने लगानीकर्ताहरु अहिले भने चुक्तापुँजी वृद्धि पछि घट्न सक्ने प्रतिफललाई लिएर चिन्तित हुन थालेका छन् ।
कम्पनीको महाविपत्ती कोषमा ७ करोड रुपैयाँ छ । यो कोष जति वृद्धि हुँदै गयो, कम्पनीबाट पुनरबीमाको नाममा बाहिरिने रकममा कटौति गर्न थप सहयोग पुग्दै जानेछ । कम्पनीसँग आफैले दायित्व लिन सक्ने (बीमा शुल्क रिटेन गर्ने) क्षमता बढ्दै जान्छ । तर, कम्पनीको यस्तो कोष बढ्न सकेको छैन् । २०७२ को भूकम्प पछि यो बीमा क्षेत्रमा ठूलो दाबी परेको थियो । त्यसैले पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको यस्तो कोषको अझ बढि महत्व हुन्छ ।
शिखरले ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । ३ लाख बढि बीमालेख जारी गरेको छ । हालसम्म १६ हजार ६ सय ३५ बीमालेखको दाबी भुक्तानी गरेको छ । यसमार्फत कम्पनीबाट १ अर्ब ८५ करोड ग्राहकले लगिसकेका छन् । कम्पनीमा परेका दाबी मध्ये भुक्तानी हुन बाँकी ८१ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको छ ।
२०७३/७४ को कम्पनीको बार्षिक विवरण अनुसार उसको बीमा शुल्कको मुख्य स्रोत मोटर बीमा, अग्नि बीमा लगायत रहेको छ । करिब ५२ प्रतिशत मोटर बीमा, १६ प्रतिशत अग्नि बीमा, विविध बीमा १० प्रतिशत र सामुन्द्रिक बीमाको हिस्सा ६ प्रतिशत छ । कुल बीमा शुल्कको ४८ प्रतिशत रकम पुनरबीमामा खर्च हुने गरेको छ ।
शिखरको प्रतिसेयर आम्दानी ४४ रुपैयाँ ७३ पैसा छ । मूल्य आम्दानी अनुपात १७ छ । यसले कम्पनीले कमाएको एक रुपैयाँलाई लगानीकर्ताहरुले १७ रुपैयाँसम्म तिरेको भन्ने अर्थ लाग्छ । यो दर २० देखि ३० सम्म हुनु उचित मानिन्छ । सेयर अवमूल्यन भएको यसले संकेत गर्छ ।
हाल कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा दिपप्रकाश पाण्डे छन् । कम्पनीको अध्यक्षता राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले गरिरहेका छन् । २०७३/७४ को बार्षिक विवरण अनुसार कम्पनीमा गौरव अग्रवालको सबैभन्दा धेरै (१३ प्रतिशत) सेयर लगानी छ ।
अधिक बिक्रीबाट सन्तुलित क्षेत्रमा
शिखरको सेयर मूल्य एक वर्षयताकै न्युन विन्दु ७३० रुपैयाँबाट बढ्ने क्रममा छ । हाल मूल्य ७ सय ६७ रुपैयाँ छ । कम्पनीले सो अघि ७ सय ७० मा पटक पटक टेवा पाएको देखिए पनि अहिले यही विन्दुमा प्रतिरोध परीक्षण गरिरहेको छ । रेखाचित्र अनुसार अब मूल्य बढ्ने क्रममा रहे ८ सय २४ मा पहिलो प्रतिरोध पाउने छ भने त्यसपछि ९ सय कट्न ठूलो अवरोध देखिदैन । नजिकको उच्च विन्दु ९३५ बाट ७ सय ३० पुगेर फर्किने क्रममा ८ सय २४ मा आएपछि ४५ प्रतिशत रिट्रेस भएको मूल्य थप बढ्न सफल भएन ।
१४ दिने आरएसआई सुचक स्केल ३८ मा आएको छ । २२ सम्म पुगेर मूल्य सन्तुलित क्षेत्रमा आएको हो । आरएसआई स्केल ३० भन्दा मुनि भए सेयर अधिक बिक्री क्षेत्रमा, ३० देखि ७० बीचमा भए सन्तुलित क्षेत्रमार ७० भन्दा माथि भए अधिक खरिद क्षेत्रमा रहेको विश्लेषण गरिन्छ ।
२१ दिने र ७ दिने सिम्पल मुभिङ एभरेज क्रसओभर भएको छ । पछिल्लो पटक छोटो अवधिमै क्रसओभर देखिएको हो । यसले मूल्य वियरिश प्रवृत्तिमा नै रहेको संकेत गर्छ । यी दुईबीच दुरी कायमै छ । यी रेखालाई विशेष याद गरिराख्नु पर्ने देखिन्छ । २१ दिने रेखालाई काटेर ७ दिने रेखा माथि लागेमा बजार केही समय बढ्नेछ ।
मूल्य घट्दो क्रममा रहेको कम्पनीको एक महिना अवधिको पीभट विश्लेषणले भने अब आगामी एक महिनामा ७ सय ४५ मा पहिलो टेवा पाउन सक्नेछ र मूल्य बढ्न थालेमा भने ८ सय ६ मा पहिलो प्रतिरोध पाउनेछ ।
कम्पनीको सेयर मूल्यले बनाएको मैनवत्ति आकृतिले अन्तिम तीन दिनमा पहिलो दुई दिन सेपरेटिङ लाइन्स वियरिश आकृति बनाएको छ । यसमा पहिलो दिनको सेतो मैनवत्ति र दोस्रो दिनको कालो मैनवत्तिको सुरु मूल्य एउटै छ । यसले मूल्य वियरिश प्रवृत्तिमा जाने संकेत गर्छ । यद्यपि यसलाई दरिलो संकेत मानिदैन । अन्तिम दिनसमेत कालो मैनवत्ति बनेको छ । तर, अन्तिम दिनको कालो मैनवत्तिको शरीर त्यसअघिको सेतो मैनवत्तिको शरीर भित्र (सुरु र अन्तिम मूल्य बीच) नै रहेकोले बिक्रीकर्ता मूल्य धेरै घटेर बेच्न इच्छुक नभएको देखिन्छ । कारोबारको लागि आगामी दिनको पहिलो कारोबार हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नोट: बजार जोखिममा आधारित हुन्छ । लगानी गर्दा रणनीतिअनुसार बजारको परिवेशको स्वमूल्यांकन गर्नु उचित हुन्छ ।
अन्य कम्पनीको विश्लेषण
सिद्धार्थ बैंकः नाफा सवा २ अर्ब, प्रतिफल बढीमा २० प्रतिशत (समग्र विश्लेषण)
१३ प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने मेगाको सेयर २७० को लक्ष्य पछ्याउदै (कम्पनी विश्लेषण)
४ अर्बभन्दा बढी नाफा गरेको नविलको सेयर बेच्ने बेला हो किन्ने ? (प्राविधिक विश्लेषण)
बिओकेः २ अर्बको नाफा, १६ प्रतिशत लाभांश क्षमता (समग्र विश्लेषण)
२६८ को मूल्य लक्ष्य ताक्दै सिटिजन्स बैंक (समग्र विश्लेषण)
नेपाल बैंकले देला त ६८ प्रतिशत लाभांश ? (समग्र विश्लेषण)
सात वर्षपछि लगातार लाभांश दिने अवस्थामा प्रभु बैंक (समग्र विश्लेषण)
ग्लोबलमा नबढेको लगानीकर्ताको विश्वास, सेयर अन्डर भ्यालुड
वार्षिक वित्तीय विवरण पछि माछापुच्छ्रेको सेयर मूल्य बढ्दै (समग्र विश्लेषण)
सन्तुलित सेयर कारोबार क्षेत्रमा हिमालयन बैंक (समग्र विश्लेषणसहित)
सेयर मूल्य बुलिस प्रवृत्तिमा जाने प्रयासमा एसियन लाइफ (समग्र विश्लेषण)
सानिमाको सेयरमा बुलिस प्रवृत्तिको सम्भावना
पुरानोमध्येमा नेसनल लाइफ किन सुस्त ? (समग्र विश्लेषण)
नेपाल लाइफको सेयरः घटे ८ सय ७७ मा टेवा, बढे ९ सय ४९ प्रतिरोध
वर्षकै उचाइ नजिक सेन्चुरी बैंकको सेयर (प्राविधिक विश्लेषणसहित)
ब्लु चिप एभरेस्ट प्रतिरोधको सामनामा (प्राविधिक विश्लेषणसहित)
गुडविल फाइनान्सः बुलिस प्रबृत्तिमा जाने प्रयासमा (प्रविधिक विश्लेषणसहित)
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ ८, २०७६, ११:५८:००
एनआईसी एशिया बैंकमा खाता खोल्दा २ लाख फाइदा
एनएमबी बैंकद्वारा ‘प्रोजेक्ट स्वरोजगार कार्यक्रम’का लागि आवेदन आह्वान, कसरी हुने सहभागी ?
जोरपाटीमा देवः विकास बैंकको नयाँ शाखा
वामदेव घुम्दैफिर्दै फेरि संसदमा !
उदयपुरको बेलकामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, ६०३ जना लाभान्वित
पृथ्वी फाउण्डेसनलाई नोबेल मेडिकल कलेजको एम्बुलेन्स सहयोग
एमसीसी सर्‍याे अर्को बैठकमा, बाँस्कोटामाथि अब सीआईबी र अख्तियारले छानविन गर्ने
छोरेपाटनको कार दुर्घटनामा गम्भीर घाइते बालिकाको मृत्यु
एमसीसी संशोधनमा ओली तयार
भैरहवा सेजमा विद्युत् समस्या, प्रसारण लाइन र सबस्टेसनमा ढिलाइ
विदेश यात्रामा कडाइ
महराले भनेका थिए, ‘छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्मका लागि राजीनामा दिएको छु’
महरा भन्छन्, 'कारागारमा रहेका ५० प्रतिशत कैदी निर्दोष छन्'
‘प्रधानमन्त्रीले देखाए नैतिकता’
सनी लियोनी नाङ्गै, विद्याको ‘बाथरोब’ पोज
‘त्रिपुरा सुन्दरी’को स्वरूप फर्काउँदै सङ्गीतका डाक्टर
कमिसनमा मुछिएपछि प्रधानमन्त्रीले मागे सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको राजीनामा
टुँडिखेलमा प्रजातन्त्रको सम्झना
‘भोले’को आँखामा फूलै संसार